Kedu ụdị mmega ahụ ị nwere ike ịme n'oche? - Mmega
Isi > Mmega > Mmega oche na ụlọ - azịza dị mfe maka ajụjụ
Kedu ụdị mmega ahụ ị nwere ike ịme n'oche?
11 Ngwa ngwaOmume ocheNke ahụ Na-arụ Ọrụ yana thega mgbatị
Ogwe aka. Nọdụ ala naochejiri ụkwụ gị kwụ ọtọ, ụkwụ gbadoro na ikpere 90 ogo na ụkwụ a kụrụ n’ala.
Dudo na ogwe aka.
Nọdụ ọdụ Hip.
ọ bụrụ na ịchọrọ ka ahụ gị topụta, si na oche gị buru ụzọ kwuo na jadas bụ ezigbo ihe mkpali, mana a na m agwa gị na ibili adịghị mkpa, ị nwere ike ịme mgbatị zuru oke n'akụkụ oche gị ịnabata oche mgbatị ahụ. ị na oche gị dị ike ma nwee ike ịkwado gị ịchọrọ oche ọfịs nkịtị na ndị na-ebugharị ya na ndị na-emebu ihe na-enweghị castors a na-ekewa ngalaba ọzụzụ n'ime ụzọ atọ ndị mbido ụzọ na ike na-ekpo ọkụ tupu mgbatị ọ bụla gbatịa ubu gị, welie aka gị elu isi gị ma pịa mkpịsị aka gị na ọbụ aka gị elu bulie ogwe aka anyị elu dị ka o kwere mee ma jide ume ume miri emi 2 ruo 3 na-agbatị elu elu na-agbatị ogwe aka n'ihu gị nkwụ na-eche ala ala isi gị ruo mgbe ị ga-akara aka gị gburugburu elu gị elu ma lee ala. Jide ọnọdụ a maka iku ume miri emi dị 2 ruo 3 ugbu a Ka anyị gbagoo triceps buliri otu ogwe aka wee gbadaa ya n'azụ, jiri mkpịsị aka anyị jide ubu na-abụghị ya, debe aka nke ọzọ n'akụkụ ikikere abụọ wee gaa n'ihu na-eku ume ume miri emi ruo 2 ruo 3 , gbanwee aka ma megharia obi na-eme ka aka dị n'azụ azụ na-agbatị obi gị na agbatị gị ka ijide ọnọdụ a jide 2 ka 3 miri na-eku ume na-eme ka ahụ gị dị elu na-agbagharị agbagharị will ga-achọ oche swivel maka nke a Nọdụ ala na nkwụsị gị jisie ike jide na nsọtụ tebụl gị jide ụkwụ gị n'elu ala Ugbu a, tụgharịa oche ahụ site n'akụkụ ruo n'akụkụ, na ogwe aka gị na-agbakwunye oche ahụ, na-emegharị ugboro 15 iji kpoo otu akụkụ ọkụ, na-adabere ụkwụ gị n'azụ oche, kechie aka gị gburugburu otu ikpere ma jiri nwayọọ nwayọọ dọpụta ya na obi gị, na-ejide ọnọdụ a maka iku ume miri emi abụọ ma ọ bụ atọ ugbu a gbanwee ụkwụ You nwekwara ike ịme mgbatị a mgbe ị kwụ ụkwụ na-agbatị otu ụkwụ n'ihu, gbatịa ikiri ụkwụ n'ala ma gbalịa zuru hol d mkpịsị ụkwụ gị na mkpịsị aka nke otu aka, were ume miri emi dị abụọ ma ọ bụ atọ na ọnọdụ a ma jiri ụkwụ ọzọ na-emegharị, ugbu a, ị na-agbatị ma na-ekpo ọkụ na-eme l Mgbe ị na-eme ihe omume ahụ, gbalịa to lekwasị anya na mma, ọ bụghị na ọnụ ọgụgụ nke ikwughachi ya, nọdụ na ikpere gị na-agbakọta ọnụ na mkpịsị ụkwụ gị na-atụtụ aka na-emetụ ala, gbagoo ikpere gị wee mepee aka gị n'akụkụ, ọbụ aka na-eche ihu, gbatịa ụkwụ gị ngwa ngwa na Nkwado ikiri ụkwụ gị ma bulie ogwe aka gi Ugbu a laghachi na ebe imalite wee mee iri iri ngwa ngwa ugboro ugboro ngwa ngwa mmegharị gị ka mma Nsonaazụ nọdụ na nsọtụ oche ahụ, ogwe aka gafere n'obi gị, kwụzie ụkwụ aka nri gị wee debe ụkwụ gị n'ala Flex your abs and bugharịa ahụ gị aka nri site na iji aka nri aka ekpe aka ekpe na-ejide ikpere ụkwụ ka ịgbanwee ụkwụ, mee ka iku ume gị kwụ ọtọ iji rụọ ọrụ gị nke ọma mgbe ị na-agbago ma bulie ya, ma kuru ikuku mgbe ị laghachiri, mee 20 ugboro abụọ. , skater na-agbanwe na nsọtụ Nọdụ ala oche ahụ site na ikpere aka nri gị na-ehulata ma na-arapara n'akụkụ ka ị na-agbatị ụkwụ aka ekpe gị n'akụkụ nke ọzọ, dabere n'ihu ma metụ ụkwụ aka nri gị aka aka ekpe gị n'otu oge ahụ aka nri gi n’azu gi ngwa ngwa ma Gbanwee akuku nke oma 30 ndi ozo na-aghagharia Gbanwee ogwe aka na ukwu ngwa ngwa o kwere mee Gbanye ABS jiri ikpere di elu gbadaa ma jikọta aka, aka n’azu isi, riri akwara afọ ma meghee elu ahụ azụ ruo mgbe ubu metụrụ ubu aka, wee gbagoo azụ oche ahụ n'ihu wee rute aka aka nri n'èzí nke ikpere aka ekpe ugboro 20 n'akụkụ abụọ ọ bụla ma kwughachi ugbu a, anyị na-anwa ije ije n'oche kwụzie ụkwụ gị wee gbagọọ aka gị, pịa ha n'akụkụ, gbasie ike akwara afọ gị ma tụgharịa azụ gị ruo mgbe ubu gị metụrụ azụ oche ahụ bulie ikpere aka ekpe gị n'akụkụ obi gị, tụgharịa aka nri aka nri gị na ikpere ahụ, na-adọta ikpere aka ekpe gị k, gbanwee ngwa ngwa, megharịa ngwa ngwa o kwere mee, ma mee 30 ugboro, ọ bụrụ na ịchọghị ịnọdụ ala oge niile ị na-arụ ọrụ, ị nwere ike ịme mgbatị siri ike na-arụ mana ị ka chọrọ oche ebe a ka anyị buru ụzọ dotice tinye ị chọrọ oche na-enweghị wiil ebe a, pụọ na oche ahụ wee kwadoo onwe gị na aka gị abụọ n'azụ gị na nsọtụ ahụ, tinye ụkwụ gị n'ala na-ehulata ikpere aka gị wee wedata ahụ gị. Debe azụ gị nso oche dị ka o kwere mee, gbatịa aka gị ma bulie onwe gị elu na ọnọdụ mmalite Amalitela izu ike na 20 reps ma jee ije ogologo Push-acha ọkụ na tebụl Tebụl gị kwesịrị ịkwado iji kwado ibu gị.
Tinye aka gị n’elu tebụl gị nke sara mbara karịa mbara ubu ma were obere usoro ole na ole laghachi. Wetuo ahụ gị na isi gị ka ọ dị na tebụl Mgbatị ahụ siri ike Younwere ike ịnwale ịdọrọ na mgbidi ma jiri aka gị jidere onwe gị dabere na ya, nkwụ dị obosara karịa ubu gị, gbagọọ ikpere gị wee gbadaa ala na mgbidi. Echefula idobe iwe gị iji mee ka ahịrị kwụ ọtọ site n'isi ruo n'ụkwụ, megharịa ugboro iri abụọ ma ọ bụ cheta ịlaghachi ma emechaa wepu akara aka n'aka mgbidi ahụ, metụ oche ahụ aka azụ wee megharịa Ọdịnihu 10 ruo 15 ugboro.
You nwere ike wepu oche wee mee squats zuru ezu ugbu a. Guzo n'azụ oche ma jide ya maka nkwado. Welie ikiri ụkwụ gị pụọ n’ala ruo mgbe ị nọ na mkpịsị ụkwụ gị nwayọ nwayọ wedata ọnọdụ a ala azụ maka sekọnd abụọ ma ọ bụ anọ mee 3 set nke 10 reps n’akụkụ na-esote bụ n’ezie ihe omume ndị a ga-eme ka calorie gị sie ike Mepee ike ma mee ka ị Mascle Mass FairWarning Naanị Mee ma ọ bụrụ na ị dịworị na nke anụ ahụ dị mma Ma echefula ịmị ọkụ ma gbatịa ahụ gị tupu ị na-emega Ahụike Ka Mma ma Jiri Nleba Anya Na-A Nwekwa Na-agagharị Na oche Nke Na-ebuli ikpere aka ekpe gị wee metụ oche ahụ ngwa ngwa weghachite aka nri gị na ọnọdụ ịnọdụ ala site na mkpịsị ụkwụ, ụkwụ ọzọ na aka ekpe na ala. Tinyegharịa mmegharị a na-agba ọsọ ọsọ ọsọ dị ka o kwere mee, nọrọ na ụkwụ ma jiri nwayọ pịa oche ahụ maka 20 ruo 30 sekọnd maka ọkara ezumike otu nkeji ma jiri ọsọ ugboro ugboro gbaa ọsọ megharịa ugboro abụọ ọzọ.
Malite na-eguzo na azụ gị na oche oche, bulie otu ụkwụ si n'ala adabere na gị hip ma jiri nwayọọ nwayọọ na-agbada na oche. Gbatịkwuo ụkwụ gị n’efu n’ihu gị ma jiri ya mee ka ibu gị guzozie. Bilie na-ejide onwe gị na ụkwụ naanị n'ala.
Mee usoro 3 nke 10 ugboro ugboro maka ụkwụ ọ bụla na-akwụghachi azụ n'ihu oche ahụ. Tinye otu ụkwụ n'oche dị n'azụ gị mgbe ahụ ụkwụ ndị ọzọ ga-abụ na apata ụkwụ ahụ yiri nke ala. Ikpere ikpere ekwesịghị ịgbatị mkpịsị ụkwụ, gbatịa ụkwụ nkwado gị wee mee ugboro iri na abụọ. Mee usoro atọ maka ụkwụ ọ bụla. kwụnye aka gị n’okpuru ubu gị na ụkwụ gị n’oche oche, debe triceps gị n’ahụ.
Bido ikpere aka gị ma metụ obi gị aka n’ala. Pịa na plank ọnọdụ. Mee ka isi gị na azụ gị kwụ ọtọ.
Mee usoro 3 nke 10 ma ọ bụ 15 ugboro ugboro. Debe ihe dị arọ n’elu oche iji jide ya n’elu ala ya na azụ ya n’ihu oche ahụ yana isi gị n’akụkụ ụkwụ oche, bulie aka elu n’elu isi gị ma jigide ụkwụ ndị a, na-eme ka azụ gị daa na ụkwụ kwụrụ ọtọ karịa n'ala, jiri nwayọ nwayọ na Lower ọnọdụ mbido, mee ka isi gị na abs dị ike iji kpuchido ala gị.
Mee usoro 3 nke iri abụọ dị mma maka gị
Kedu ka m ga-esi emega ahụ mgbe m nọ ọdụ?
Nọdụna ihemmega ahụbọl na-amanye gị ka ị jiri abs gị jide onwe gị n'ọnọdụ.
Sneak ole na ole n'oge ọ bụla ị ga-esi na oche gị bilie nanọdụ alalaa azụ.
Gaa azụ kwụ ọtọ.
Rịdata otu inch nke oche, na-eme ka ị bụịnọdụ alaala.
Jide sekọnd iri.
Bilie azụ guzoro.
Ọnwa Ise 5, 2014
Nnọọ? Eeh, oh ee. My TPS akụkọ. Ọ na-abịa, naanị m ga-ebu ụzọ gbatịa m.
Ọ DỊ MMA. Ndewo onye ọ bụla, nke a bụ Dọkịta Jo, taa m ga-egosi gị ụfọdụ mgbatị na omume ị nwere ike ịme na tebụl gị mgbe ị na-arụ ọrụ ma enweghị ezigbo ohere iji bilie ma megharịa. Nke a bụ otú anyị si amalite.
Ya mere enwere m oge m ka m wee nwee ike isonye. Ihe mbụ m ga - eme ma ọ bụrụ na m nọ ọdụ ogologo oge, m ga - anọdụ ala ntakịrị. Naanị iji nweta ihe niile na-ebu ụzọ.
Ya mere, m ga-amalite na ise. Gbasaa ụkwụ gị obere. Bịa, otu, abụọ, atọ, anọ, ise.
Nke ahụ mere ka ihe niile na-agagharị ntakịrị, nrụgide si n'okpuru. Ma mgbe ahụ, m ga-eme obere ntụgharị. Naanị m ga - ejide ha ihe dị ka sekọnd ise n’akụkụ ọ bụla.
Yabụ mgbe ịnwere oche gị ebe a, jidere ya, gbagọọ ya n'otu ụzọ, ma jide ya ihe dị ka sekọnd ise. Ma laghachi n'ụzọ ọzọ ma jide ihe dị ka sekọnd ise. M na-eme atọ n'akụkụ ọ bụla.
Ọzọ naanị ihe dị ka sekọnd ise iji mee ka ntụgharị ahụ dị. Gbatịa spine gị ntakịrị. Agbatị dị ka nke ahụ.
Nwere ike ịbụ obere pop, nke ahụ dị mma ma ọ bụrụ na ọ naghị afụ ụfụ. Nke ahụ dị mma, mgbe ụfọdụ ọkpụkpụ ndị a kwesịrị ịhazigharị onwe ha. Na mgbe ụfọdụ ọ na-adị mma.
Ọ na-ewe obere nrụgide nke ihe niile. Yabụ enwere mgbatị mara mma na ebe ahụ wee ọzọ n'akụkụ nke ọzọ. Ma nke na-esote, ọ bụrụ na ị pịnye ọtụtụ ihe ma megharịa aka gị, eleghị anya ị ga-achọ ịgbatị ihu gị ntakịrị.
Otu a ga - abụ naanị oge ijide ise. You nwere ike ma gbadata ma ọ bụ m ga-etinye nrụgide ụfọdụ. Ọzọ ụdị sekọnd ise.
ịgbaji atọ agbafere atọ
Jide nke ahụ, gbanwee akụkụ. Nwere ike ịgbanye mkpịsị aka gị iji mee ka ọ dị ntakịrị, ma ọ bụ ịnwere ike idebe ha, na-adabere n'otụ uru akwara ndị a dị. Sothis dị ntakịrị ntakịrị, nke a bụ ntakịrị ihe.
Ọzọkwa anyị na-eme naanị atọ n'akụkụ ọ bụla iji dọpụta ya niile ma tọpụ ya. Ọ dabara nke ọma, anaghị m anọ ọtụtụ ụbọchị, mana m ga-ahụ akwụkwọ ederede n'anya, dee na kọmpụta ahụ, yabụ mara etu nkwojiaka na-adị mgbe ị na-eme ihe ahụ niile na ihe ndị ọzọ. Iwepụta oge iji gbatịa ya na-abụkarị ezigbo mma.
Ọfọn. Ma laghachi na uzo ozo. Yabụ ebe a ọ bụ ụzọ ọzọ gburugburu.
Ọ bụrụ na mkpịsị aka gị dị elu ọ ga-agbatị ntakịrị, ma ọ bụrụ na ị na-eme aka ọ gaghị agbatị nke ukwuu. Dabere na etu ị siri sie ike, nke a ga-agbatị akụkụ ala ahụ ntakịrị. Ọzọkwa, ịmara, ihe dị ka sekọnd ise, ọ gaghị adị oke ogologo, mana ọ ga-ezuru ya ịtọpụ ya ntakịrị.
Ọ bụrụ na ị nọ na Abukel ma ọ bụ nwee mgbidi n'akụkụ gị, ịnwere ike itinye aka abụọ megide mgbidi ma jiri nke a dị ka nrụgide yana mgbe ahụ jide nnọọ agbatị ndị a ma soro m ma ọ bụrụ na ịchọrọ ịgbatị ikpeazụ ebe a. Kụpụtụkwa ya obere. Ugbu a, ka anyị laghachi n'ụkwụ.
Ya mere n'oge a ọ ga-abụ nanị obere njem. Ya mere, ka anyị mee 10 n'akụkụ ọ bụla. Emekarị ị nwere ike ịme otu ihe wee gbanwee ya azụ na azụ.
Fọdụ ndị mmadụ na-achọ ime ya niile n'otu ibe, aga m atụgharịa. Ihe dịgasị iche iche na-amasị m. Ya mere, weta ya.
Mgbe ị na-anọdụ na tebụl, ị nwere ike ịnọ n'ogo ebe ị nwere ike ịbanye na tebụl gị. Ya mere gbagoo ntakịrị ma ọ bụ gbagoo, ma gbalịa ka ị ghara itinye ikpere gị n'ime tebụl ahụ. M ga-asị na wepụta ya ntakịrị ma ọ bụrụ na ị nwere ike.
Okwesighi ka odi elu, nke ahu bu otu uzo iji mee ka ihe niile na-agaghari. Ikekwe ị nọrọ ọdụ lekwasịrị anya nwa oge, na-anwa ịtọpụ ya ma mee ya ka ọ gawa. Ya mere, na-aga n'ihu na azụ.
Anyị ga-eme otu ọzọ n'akụkụ ọ bụla. Ya mere, nke ahụ bụ maka úkwù, ka anyị gbuo ikpere n'ala. Otu ihe, enwere olile anya na ị ga-enwe ohere zuru oke n’okpuru tebụl gị, mana ọ bụrụ n’abụghị ị nwere ike ịgbanye oche gị ntakịrị.
Ma n’oge a ka ị ga-eji ntakịrị mkpịsị ụkwụ gị kpuchie ụzọ. Ya mere, ụdị ịgbatị a na-eru ebe ahụ. Ga-eche ya na quads gị, na-enweta ọbara na-agba na mgbapụta.
Were obere ezumike a. N'ihi na ọmụmụ ihe na-egosi na ọ bara uru karịa imebi oge ezumike. I nwere ike ịgwa onye isi gị na.
Gbatia. Na-agbatị ma na-agba. Enwere m ike ịnụ na akwara quad m nwere obere ọkụ ebe ahụ.
Yabụ na ịkwesighi ime ọtụtụ. Ọ bụghị na ị ga-enwe nwere ụkwụ ụkwụ. Nwere ike ịnwe ụfọdụ isoro gị rụọ ọrụ, ụfọdụ mmadụ nwere ha, wee nwee ike iwepụ ihe ndị a ma ọ bụrụ na ịchọrọ.
Ma ọzọ na n'akụkụ ọ bụla. Ma na nke ikpeazụ, enwere m obi ụtọ na m ga-agbatị akwara piriformis gị, mpaghara ahụ na-atọ ụtọ, n'ihi na ọtụtụ ịnọ ọdụ gị nwere ike ịbụ ihe na-egbu mgbu. Ya mere, aga m alaghachi na ngụ oge ebe a, gafere ụkwụ gị n'akụkụ nkwonkwo ụkwụ gị ziri ezi na ikpere ikpere ebe ị na-eme ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ ọnụ ọgụgụ 4.
Ma mgbe ahụ ị ga-eme ka ahụ gị rute n'ụkwụ gị. Ya mere, bia ebe a. Gbalịa idobe azụ gị ka o kwere mee.
Fọdụ ndị mmadụ nwere ike ịgbadata ọbụna n'ihu. Kwesịrị ịnwe mgbatị ahụ n'ebe ahụ n'okpuru. Fọdụ ndị mmadụ nwere ike sie ike, ị nwere ike ibilite ntakịrị oge na-agbatị.
Nke ahụ dị mma. Ọ bụrụ na ị nwere ike, afanyekwa na ya obere, ma nke a kwesịrị a ọma gbatia. Okwesighi ịbụ ihe na-egbu mgbu, yabụ ọ bụrụ na ọ na-afụ ụfụ obere wee laghachi obere.
Ọ bụrụ na ị nwere nsogbu arụmọrụ ma ọ bụ nsogbu sciatica, ọ nwere ike ime ka ike gwụ gị na ịkụ ụkwụ gị. Nke ahụ dị mma ma ọ bụrụhaala na ọ pụọ n'anya ozugbo ị hapụrụ ya. Mgbe ahụ gbatịa akwara ndị ahụ iji wepụ nke ahụ.
Ya mere gbatịa ọzọ, jide ya ebe ahụ. Ihe dị mma banyere nke a bụ, ọ bụrụ n ’ịnọ ọsọ ọsọ ma chọọ ịrụsi ọrụ ike, ị ka nwere ike pịnye ihe mgbe ị na-eme nke a. Gbalịsie ike ka ị ghara ịgbagọ agbagọ.
Ka na-agbalị ịnọgide na-enwe ezi pop-prop Usoro. Mana ị nwere ike ịme ihe ndị ọzọ ugbu a, nke ahụ bụ ihe dị mma. Ọzọkwa, ị nwere ike itinye ikpere gị na ikpere gị maka obere mgbatị.
Mana ikwesighi iche na nke a gha abu ihe obula diri gi nma. Enwere m obi ụtọ na m ga-enwekwu mgbanwe n'ihi na m na-arụ ọrụ na ya. Ma ọ bụrụ na ọ bụghị, nke ahụ dị mma.
Just na-aga n’ike gị. M na-aga onye ọzọ na peeji a. Jide n'aka na ị gbadara ụkwụ gị oge ọ bụla iji tọgharịa akwara ndị a niile.
Ma onye isi wee bịa, were ya na ị na-eche echiche. Ee, Ana m arụ ọrụ na akụkọ TPS ndị ahụ, mgbe ị na-agbada ma na-agbanyekwu ebe ahụ. Enwere ike ịme ha nke ọma ebe niile, ọ bụghị naanị na ị ga-eme ọhụụ.
Ọ bụrụ na ị nwere ọrụ oche ị nwere ike ime nke a n'ebe ọ bụla ụbọchị niile, ọbụlagodi na ị na-eje ije ọtụtụ, ị ga-achọ ịgbatị ihe a niile ma mee obere mmega ahụ iji mee ka ọbara na-agba. Ugbu a, ka anyị gbanwee n'akụkụ nke ọzọ. Ya mere, weta ihe a ebe a, nke a dị ntakịrị ntakịrị maka m ebe ọ bụ na a wara m ahụ n'úkwù m n'oge gara aga.
Mana otu ihe ahụ, pịa obere aka na ikpere gị ma weta ahụ gị n'ihu. Peoplefọdụ ndị na-anwa ịdata n’ala. Mana ọ masịrị m idebe azụ gị azụ, ọ dị m ka ịme ya na-enye gị obere agbatị.
Mgbe ị nweghị ohere buru ibu na tebụl gị, ị ga-achọ iti isi gị n’elu tebụl ahụ. Yabụ ịgbatị, nwee mmetụta, ị ga-eche na ịmara ihe ọzọ na mpaghara ala. Ma zuru ike ya.
Tọgharia n'ụzọ ụfọdụ. Kpoo ya mgbe ịchọrọ ya. Ma malitezie ọzọ.
O wee daa jụụ. E wezụga ọrụ, ị nwere ike iche banyere ihe ndị ọzọ ntakịrị. Dị ka ihe ị ga-eri nri abalị ma ọ bụ ihe ị ga-enye ya ka ọ rie mgbe ị gụchara ịgbatị ahụ gị.
Were ume miri emi ma mee ka nchegbu niile pụta. Ọ dị mma ma zuru ike. Anyị ga-alaghachi na nke ahụ.
Ihe di mma ma gbue. Nwere ike iwepu ntutu nkịta ahụ na sọks gị ma ọ bụrụ na ọ dị mkpa. Mgbe ị na-ahụ na n'ime.
Anyi na akpo ha obere ugwu. Ha na-ahapụrụ anyị ntakịrị nke a ụbọchị niile ka anyị ghara ichefu ha. Na na, ị mara, ọ ewute nkịta ntutu bụ m ewute.
Ọ dị ezigbo mma. Ogologo, gbasaa ebe a. Ihe ikpeazu aga m acho gi bu ka ijide n’aka na mgbe inodu otutu oge ichoro ka umu ehi gi na agaghari.
Chọghị inwe nsogbu ọ bụla na DVT ma ọ bụ ihe ọ bụla. Otu ihe dị mfe nịịwere were ụkwụ gị gbagoo wee laghachi. Ya mere, naanị 10 n'ime ha, laghachi azụ iji jide n'aka na nwa ehi ahụ na-arụ ọrụ dị ka mgbapụta okike iji mee ka ọbara dịrị n'ọbara.
Naanị mee ihe dị ka iri, mana ịlaghachi azụ iji jide n'aka na ihe niile dị gị n'ahụ na-arụ ọrụ ma na-agbasa. Ọzọkwa, nke ahụ bụ ihe ị nwere ike ịme ogologo ụbọchị niile, ị gaghị akwụsị ịkwụsị n'ihi na ị ka nwere ike ịrụ ọrụ gị mgbe ị na-agbanye nkwonkwo ụkwụ gị, nke dị mma. Yabụ, nke ahụ bụ ụfọdụ mgbatị na mmega ahụ ị nwere ike ịme.
Ma nke a bụ ezigbo oge ma ọ bụrụ na ị nwere ajụjụ ọ bụla hapụrụ ngalaba ahụ. Ọ bụrụ n’ịchọrọ ịlele edemede ndị ọzọ gafee na AskDoctorJo.com Ma cheta, gbaa mbọ hụ na ị kporiri ndụ ma enwere m olile anya na ị ga-enwe ahụ iru ala
Kedu ihe omume oche kachasị mma maka ndị agadi?
Maka oche nkwagharị na-agandị agadi, ndị a 8omume nọdụbụ ụzọ dị irè iji wulite ike ahụ niile na mgbanwe.
Mmachi Motion Mbelata.
NọdụJacks na-awụlikwa elu.
Lkwụ weliri ighikota.
Ndi oche na-ebugharị na-arụ ọrụ?
Naoche pushupbụ mgbatị ahụ dị elu nke na-eleba igbe, triceps, na isi anya anya, ebe ọ na-abawanye ike na ntachi obi.21bọchị 21 2014
Kedu ihe na-eme, ọ bụ Chris Heria. Nabata na isiokwu ọzọ. Taa, m ga-egosi gị mgbatị dị oke egwu iji wulite ebe ọ bụla nke obi gị nwere naanị oche abụọ site n'ụlọ. (Joy Music) Ihe ka ọtụtụ n'ime ndị na-emega ahụ n'ụlọ anaghị arụ ọrụ ma ọ bụ igwe mmega ahụ ma ọlị, yabụ na anyị ga-eji oche abụọ n'ụlọ anyị iji nyere anyị aka itinye oke ahụ na mmega ọ bụla chọrọ ọzọ Areas nke anyị obi dị ka nanị nkezi push-elu n'ala.
Ya mere, anyị ga-eji oche maka mmemme ndị a niile. Ọ bụrụ n’ịhụta mmega ahụ ọ na-esiri gị ike nke ukwuu, adala mbà site na mmemme ndị ọzọ onye ọ bụla nwere ike ịme mgbe ọ ka na-arụ ọrụ otu akwara na-ewuli gị ike iji mechaa mee otu mmega ahụ m gosipụtara na ederede taa. Ugbu a na usoro nke taa, iji nweta mgbatị ahụ zuru oke, anyị ga-etinye aka na akwa akwa nke obi anyị, nke etiti na nke ala.
Emewo m usoro a iji mebie akụkụ nke ọ bụla tupu m gaa na nke ọzọ. Yabụ mgbe ị dị njikere ibido gị, gbaa mbọ hụ na ibudatara ngwa ahụ ngwa ngwa ahụ sitere na Storelọ Ahịa ma ọ bụ Playlọ Ahịa Google. Mepee ngalaba mgbatị YouTube, ị ga-ahụ usoro a ma ọ dị mma ịga.
Cheta na mmemme ndị a niile ga - arụ ọrụ n’obi gị, mana ha ga - emesi ike na otu ngalaba. Ya mere, anyị ga-amalite na etiti akụkụ na ihe omumu mbụ anyị ga-amalite bụ otu aka na-agbanye aka. 10 ugboro ugboro maka ogwe aka ọ bụla.
Ya mere aga m aga n’ihu ma mechaa ikpe m ma emesịa m ga - egosi gị mgbatị ahụ ọzọ ị nwere ike ịme ma ọ bụrụ na ị nwere nsogbu mmega ahụ a. Yabụ ka anyị bido ozugbo. Anyị na-abanye n'ọnọdụ nkwụ elu.
Wantchọrọ ijide otu ụkwụ nke oche ma anyị ga-abanye anyị. (Egwu obi ụtọ) Ọ dị mma, ma gbanwee. Anyị kwadoro ndị na-ebu agha.
Ihe omumu a anyi na-ewepu otu akwara pectoral n'otu oge. Ọ bụghị naanị na nke a dị ukwuu maka imepụta nnukwu ibu karịa na igbe ọ bụla, mana ọ na - enyere aka ịgwọ ọrịa ahụ ike. Mmega ahụ na - eme ka ịchọrọ ịdabere na ogwe aka gị na - arụ ọrụ.
Ogwe aka na-emegide ya na-ejide naanị iji nye nkwụsi ike na nkwado. Chọrọ ịgbalị iji ogwe aka nke onye iro ahụ dịka o kwere mee. Mana n'ezie, ọ bụrụ na ị na-ebido, ị nwere ike iji obere ya nyere gị aka na ntinye aka.
Ma ọ bụrụ na ị ka na-agbatị mgbatị ahụ a, ihe ọzọ bụ itinye ogwe aka nke onye mmegide gị, nke na-akwado nkwado, na elu elu maka nkwado na nkwado n'oge ntinye, na ị nwedịrị ike iji ogwe aka nke onye iro. Ma ị nwere ike ịmepụta ihu ọma maka ogwe aka na-ebuso gị agha site na ikpo akwụkwọ ma ọ bụ ihe ọ bụla ọzọ ị nwere n'ụlọ gị, gaa na mgbatị ahụ na-esote, gaa n'ihu na nrụgide. N'etiti obi anyị, tinye ihe ntanetị maka 10 ugboro.
trek emonda nyochaa
Aga m eme akpa m na mbu, aga m egosi gị mmega ahụ ọzọ ma ọ bụrụ na ịnweghị ike ime tuck planche pushups. (Obi ụtọ na-atọ ụtọ) Ọ dị mma, n'ebe ahụ ka anyị nwere tuck planche pushups. Ndị a bụ ihe siri ike n'ihi na ịchọrọ idebe ahụ gị na ntanetị.
Ma ọ bụrụ na ịmalite ịmalite mmega ahụ a, ị nwere ike ịdabere na ike gị ka ị nwere ike, were ọnọdụ, ma mee akwa gị. Ka ị na-eme ihe omume a, otú ahụ ka ị ga-atụkwasịkwu obi. Ka ị na-adaberekwu, otú ahụ ka ị na-enweta otuto.
Mana nke ahụ sitere na ike enwetara site na mmega ahụ. Ma ọ bụrụ na ị ka na-enwe nsogbu na mmega ahụ a, ihe ọzọ ga-abụ iji oche ọzọ nyere gị aka ibili ma nwee ike ịga ala niile na ụzọ niile iji nyere gị aka ịnọ n'ọkwa. Ozugbo ịkwadoro gị nke ọma, ịnwere ike iwepụ oche na-akwado ụkwụ gị wee gaa n'ihu, dakọta n'ihu ma tinye ya dịka o kwere mee.
Ugbu a, anyị ga-abanyekwu na mmega ọzọ. Ihe ndị a ga-abụ ihe nwughari na-agbanye ume n'obi anyị. Anyị ga-eme ugboro ise.
Emechaa m ga-egosi gị ihe ọzọ. Kewapụ oche ndị a. Anyị na-eme inupụ-elu.
Jidere otu akụkụ, kpoo elu. Jidere akụkụ nke ọzọ, kpoo elu. Nke a bụ rep, ka anyị mee anọ ọzọ. (ọ joyụ music) N'ebe ahụ, anyị agagharịwo na-agagharị agagharị.
Mmega ahụ mara mma. Anotherzọ ọzọ dị mma iji wepu okwu ọ bụla yana ịrụ ọrụ na mpụta na ime ime gị. Ugbu a, ihe ọzọ na nke ahụ ga-abụ ịme otu mmega ahụ na-ejigide ọbụna elu dị elu.
Nwere ike iji akwụkwọ ma ọ bụ abụọ dịka m kwuru na mbụ. Ihe na-eme mgbatị ahụ a kachasị sie ike bụ ịdị elu nke ala ị ga-eru ya họrọ oke dị elu nke ga-ama aka, mana kwe ka ị rụọ ọrụ a mgbe ị dị njikere idozi onwe gị nke ọma. Ugbu a gaa n'ihu na mmega ahụ ọzọ.
Anyị ga-amalite accenting anyị elu obi ebe na-akpọlite ​​diamonds niile site na mgbe pushups. Aga m eme 10 reps wee mebie ya mgbe anyị megharịrị. Ya mere, ka na-amalite na mgbe nile push-elu na-akpali na diamond.
Nke ahụ bụ otu. (Obi ụtọ na-atọ ụtọ) Ọ dị mma, n'ebe ahụ ka anyị nwere diamonds maka ịkwanye mgbe niile. Onye na-egbu ihe maka akwa Chest anyị na mgbakwunye, maka oge, anyị.
Ka anyị na-agbanwe ọnọdụ aka anyị site na diamond ruo n'ọnọdụ aka aka nkịtị, etinye m oke ahụ n'otu igbe. Ugbu a emeela m ugboro iri. Ma ọ bụrụ na ị na-amalite, Achọrọ m ka ị họrọ ọtụtụ nkwughachi ndị ga-ama gị aka. Nweta ego a mana ka kwe ka onwe gị mezue mmega ahụ zuru oke.
Ma ọ bụrụ na ị ka na-enwe nsogbu na mmega ahụ, ihe ọzọ ga-eme bụ ịbelata elu. Ebe dị elu karịa, ka ị ga - ebu ibu ahụ. Mee ka ịdị elu ya dị ala, obere ibu ahụ ị na-ebu ya họrọ oke dị mma maka gị ma nye gị ohere ịme mgbatị ahụ a.
Omume ọzọ anyị ga-eme ugbu a, anyị ga-aga n'ihu na-elekwasị anya na mpaghara obi anyị dị elu ma ọ ga-abụ ihe mgbawa, nke dị elu. Aga m eme 10 ma anyị ga-agbaji ya. (egwu na-ada ụda) Ọ dị mma, ma ebe ahụ anyị nwere ihe mgbawa, ebuli elu.
Ugbu a cheta, mgbe ọ bụla ị na-eweli ụkwụ gị na ọnọdụ nkwụ elu, ihe a na-elekwasị anya bụ n'elu obi gị dị elu. Dị nnọọ ka diamond ahụ a zụlitere maka ebugharị oge niile, nke a bụ elu nke okuku, nke na-eme ka nke a sie ike. N'ụzọ doro anya, ịchọrọ ịhọrọ nyocha na-arụ ọrụ maka gị.
Cheta, dị elu dị elu, ka a na-etinyekwu ahụ arọ. Na-eme ka ịdị elu ya dị ala, ọ na-adịkwu mfe ọ na-eme ka a gharakwa ibu ibu. Ọ bụrụ na ị na-amalite mmega ahụ a, ịkwesighi ịgbasa site na ala; ị nwere ike ịgbawa dị ka ike kwere gị ma nweta oke ngagharị na-enweghị n'ezie li.
Naanị ịchọrọ ịkwanye ike dị ka ị nwere ike ma mee nke ọma na otu ọ bụla na-enye ike. Ma nke ahụ ga-abụ ihe ọzọ na mmega ahụ. Ọ bụghị n'ezie ịkwapụ n'ala, na-enye ya ihe niile ị nwere na ọkwa ọ bụla.
Push dị ka ike kwere gị ma mee ka ihe dị mfe maka ijikwa gị. Ugbu a, ka anyị gaa n’ihe omumu ọzọ, anyị nwere Pushups miri emi. Nke a ga-emesi mpaghara obi anyị dị n'etiti aka.
Aga m aga n'ihu mee ugboro iri. (Joy music) Ọ dị mma, n'ebe ahụ ka anyị nwere ihe omimi miri emi. Otu uru kachasị mma nke mgbatị a bụ na ị nwere ike ịrụ ọrụ karịa obi gị, mee ka ọnụọgụ gị dị elu, na ọbụna ụdọ akwara mgbawa.
Mepụta igbe siri ike ma sie ike karị. Ọ bụrụ na ị na-amalite ịmalite mgbatị ahụ ugbu a, naanị ị chọrọ ịga omimi dị ka ịchọrọ. Ka ị na-eme nke a, otú ahụ ka ị na-ewukwasị ike; ị ga-enwe ike ịbanye miri emi na miri.
Uzo ozo nke ihe omumu a bu ime otu uzo ma n'elu elu. Dị ka aka gị dị elu, ị na-etinye obere ahụ dị arọ na mgbatị ahụ a. You nwere ike itinyekwu uche na ụdị gị.
N'ikpeazụ, ka ị na-etolite ụdị na ike gị nke ọma, ị ga-enwe ike wedata ihu elu nke ị na-atụkwasị aka gị ma tinyekwuo arọ na mgbatị ahụ a. Ha ga-esiwanye ike ma nyere gị aka ịmekwu ahụ ike. Ugbu a gaa n'ihu na mmega ahụ na-esote, na-enwe mgbatị nke ga-emesi obere obi anyị ike.
Aga m eme ugboro iri na ise wee gosi gị ihe ọzọ. (egwu na-ada ụda) Ọ dị mma, ya mere, anyị nwere dips. Otu n'ime ihe omume kachasị mma maka obi gị.
Ma ọ bụrụ na ị nwere nsogbu na mmega ahụ a, mgbe ahụ ị nwere ike rụọ ọrụ naanị n'akụkụ na-adịghị mma nke itinye. Malite na ebe itinye mmiri wee gbadaa dị nwayọ nwayọ na n'ụzọ a na-achịkwa ka ị nwere ike, ị nwere ike ịga n'ihu ma jiri ụkwụ gị kwụ ọtọ. Nke a bụ otú ndị isi ga-esi lekwasị anya n'akụkụ na-adịghị mma ma ọ bụghị n'akụkụ akụkụ ahụ nke na-akwagide ọzọ.
Ka ị na - arụ ọrụ na - adịghị mma nke mmega ahụ, na - agbada nwayọ nwayọ yana n'ụzọ a na - achịkwa ka o kwere mee, n'ikpeazụ ị ga - ewulite ike ịkwanye na ịlaghachi azụ. Mgbe ị na-alụ ọgụ ọgụ ọzọ, ịchọrọ ilekwasị anya na aja na-adịghị mma nke na-ewulite ike gị maka mgbatị ahụ. Ma ọ bụrụ na ị ka na-enwe nsogbu na mmega ahụ a, ụzọ ọzọ ga - abụ idobe ụkwụ gị n’elu elu dị ala iji nyere gị aka ịrịgo na ịrịda.
Nwere ike inye aka bulie itinye gị azụ site na ịpị ụkwụ gị. Otú ọ dị, cheta na ịchọrọ iji obere nkwado sitere n'ụkwụ gị mee ihe. Omume ọzọ ị nwere ike ime iji melite ike itinye gị ga-abụ akụ.
Ọ bụ ihe yiri ụdị mmegharị ahụ na ọ ga - ewuli ike gị ka ị nwee ike mechaa tinye. Ya mere, na-eme ihe atọ ndị ọzọ niile ị ga - emecha nwee ike iwulite ike gị ịme ezigbo mgbatị na mgbatị a, na-erepụ obi anyị niile site na mgbatị dị iche iche na nwayọ. Ọ ga-ewe anyị sekọnd 20 iji gbadata, anyị ga-ejide ala maka sekọnd ise, wee were anyị 20 sekọnd ịlaghachi na mkpokọta nke 45 sekọnd, naanị maka otu rep.
Ya mere aga m eji ogwe osisi ala nke oche ndị ahụ ma ị nwere ike iji nchịkọta akwụkwọ ma ọ bụrụ na oche gị enweghị ihe ndị a. Ọ dị mma, yabụ ka anyị bido ịrịda. 20 sekọnd.
Control, ikesiike gị isi. Afanyekwa obi gi. (Obi ụtọ na egwu) Ọ dị mma, anyị ga-ejide ya. (Egwu obi ụtọ) Bido. (Obi ụtọ na-atọ ụtọ) N'ebe ahụ ka anyị nwere ya, nwayọ nwayọ, ịkwanye mgbatị.
Ngwa ngwa ngagharị bụ otu n'ime ụzọ kachasị mma iji mee ka oge gị dịkwuo ala, nweta hypertrophy, wulite ume, ma mee ka ị dị ike. Ọ bụrụ na nke a bụ mbido mbụ gị na ahụ gị na-ama jijiji, ọ bụ ezigbo ihe na-egosi na ị bụ otu na ị nwere ike irite ọtụtụ uru na mgbatị ahụ a. Ọtụtụ mgbe ị na-eme nke a, ị ga-ahụsi ike na ahụ gị na-eme mmega ahụ ma hụ oke ike ị nwetaworo.
Ọ bụkwa otu n'ime ụzọ kachasị mma iji kwụsị mgbatị gị siri ike. N'aka nke ọzọ, ọ bụrụ na ịnwe nsogbu na mmega ahụ a, ịnwere ike iji aka gị mee nke a. Cheta, ka aka gị dị elu, a ga-etinye obere ahụ ya na ya.
Nwere ike itinyekwu uche na ụdị na usoro gị. Na n'ezie, ka ị na-emega ahụ ma ọ bụrụ na ị na-arụ ọrụ nke ọma, ị nwere ike ịmalite ibelata ịdị elu ahụ ruo mgbe ị mere ya na ala dị ala, dịka nke ahụ. Nke ahụ ga-emezue mgbatị ahụ dị oke mma n'ụlọ na-eji naanị otu oche.
Ugbu a enwere m mgbapụta n'ime obi m ma ọ bụrụ na ị nwere ike ime m otu, nke ahụ dị mma. Jide ka iji. Ma iji nweta ọtụtụ uru na usoro mgbatị ahụ a, ị ga-enwe ike ịga n'ihu ma mee abụọ ma ọ bụ atọ karịa ya iji rụchaa usoro mgbatị ahụ a, yana mgbatị ndị ọzọ dị ka nke a, banye n'ụdị kachasị mma nke gị ndụ, gbaa mbọ hụ na ị sonyere thenx.com wee nweta ohere niile maka mmemme ọzụzụ anyị, usoro ịhazi usoro na mmega ahụ kwa ụbọchị ga-azọpịa gị.
Ma budata ngwa ahụ ngwa ngwa ahụ n'ụlọ ahịa ngwa iji buru mgbatị anyị na ebe ọ bụla ị gara ma sonyere nde kwuru nde ndị ọzọ na-agba ọsọ gburugburu ụwa bụ ndị na-abanye n'ụdị kachasị mma nke ndụ ha na, dị ka oge niile, ọ bụrụ na isiokwu a masịrị gị, ijide n'aka na ịpị bọtịnụ Dị ka. Hapụ ikwu n’okpuru, mee ka m mara ihe isiokwu na-esonụ ga-ekwu. Ma kekọrịta edemede a na otu enyi na-achọ ịkpụzi obi ha n'ụlọ.
Ma ọ bụrụ na i mebeghị, jide n'aka na ị debanyere aha. Ana m eziga ụbọchị Sunday ọ bụla na elekere asatọ nke abalị.
Oge Ọwụwa Anyanwụ US. Ma ọ bụrụ na ị kwuo okwu n'ime nkeji iri atọ mbụ ị nwere ohere iji merie n'efu ngwa ngwa ngwa ngwa. Maka otutu ọdịnaya m n'ime izu, gbaa mbọ hụ na ị debanyere aha m ọzọ, nke bụ YouTube.co / chrisheria ma soro m na Instagram.
Maka ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ ọkwa ọ bụla, ana m enyekarị ụdị nnyefe. Yabụ ọ bụrụ na ịchọrọ oge iji bụrụ akụkụ ya, soro m na IG. Ma ọ bụrụ na-amasị gị na music ị nwere ike mgbe niile chọta m niile music niile music nyiwe.
Mana m na-ebunye ya na SoundCloud mgbe niile. Nke ahụ bụ SoundCloud .com / chrisheria yabụ gbaa mbọ hụ na ị na-eso m, naanị wepụtara ọhụụ ọhụụ akpọrọ jide m nso.
Lelee nke a. Gwa m mgbe ọ na-ezighi ezi ♪♪ Mgbe ị chere na onweghị ihe m bụ wait enweghị m ike ichere igosi gị na ihe gị adịghị mma wrong Ugbu a, m na-akụzi ya 'Ọ nweghị onye ga-ewe m n'ọrụ ♪♪ Aghaghị m ikpuchi mmefu ego ♪♪ Ma ugbu a ị chọrọ inweta ♪♪ Maka na ha niile chọrọ imetụ ya aka ♪♪ Ma ugbua ịmara na m bụ nke a ♪ ♪ Ọ bụghị ajụjụ ma ọ bụ ihe ọ bụla ♪♪ know ma na ọkụ mmụọ ọ bụ nke m ♪♪ Emela ihe ọ bụla m na-eme osooso ma apụla ♪♪ Enweghị m oge maka mkparịta ụka ♪♪ M kụrụ gas wee pụọ gone Enweghị m oge maka mkparịta ụka ♪♪ Maka anaghị m gbalịa iso gị gwuo egwuregwu ndị a ♪♪ Shit abụghị otu ihe ahụ ebe m so gị dinaa ♪♪ anaghị m eme njem na gburugburu gị kwa ụbọchị ♪♪ Kwuru na anaghị m eso gị egwu egwuregwu ndị a ♪♪ 'ọ bụghị otu ihe ahụ kemgbe gị na gị ♪♪ anaghị m anwa ime njem n'akụkụ gị oge ọ bụla
Kedu ka ị ga-esi ida abụba afọ mgbe ị nọ ọdụ?
Mmega 1: The oche itinye
Welite ụkwụ gị na sentimita ole na ole n’elu ala ma soro gịafọmọzụlụ. Mgbe ahụ pịa aka gị iji bulie ahụ gị elu n'elu oche ahụ, ruo mgbe ogwe aka gị kwụ ọtọ. Jide otu ọnụ, wee gbadaa n'oche. Tinyegharịa maka sekọnd iri atọ.07.25.2011
Kedu ihe ịnọdụ ala na-eme?
Nọdụbu omumu ihe omumu nke ime site n’ina ugha n’azu ma na ebuli aru gi. Ha na-eji ibu ahụ gị mee ka ọ dị ike ma na-emekwa ka uru ahụ na-eme ka uru ahụ́ na-ada ada.Nọdụrụọ ọrụ ikensi abdominis, transverse abdominis, na obliques na mgbakwunye na gị hip flexors, obi, na olu.Ọnwa Ise 23, 2019
Kedu ihe bụ nzube nke oche na-akwalite usoro?
NaKwaa-eluule ka ejinhaike elu na ntachi obi. Nke a dị iche, nke na-eji aocheiji bulie ahụ dị elu, ejiri ya dị ka akụkụ nke Njirimara Ntanetị n'ịntanetị maka Volleyball Beach. Na ule a, ọnụ ọgụgụ kachasị nkeKwaa-elurụrụ na 30 sekọnd na-dere.Mar 22 2021
Enwere m ike ida abụba afọ site na ịnọdụ ala?
Ọ bụ ezie na ọ dịghị otu mmega ahụ nke na-ere ọkụafọ abụba, mmega ahụ ọ bụlanwere ikeEnyemakabelatan'ozuzu aruabụbamgbe a na-eme ya mgbe niile yana nri dị mma.Afọomume dị ka crunches ma ọ bụnọdụ ala-acha ọkụ na-emeọ bụghị kpọmkwemgbaa abụba afọ, ma hanwere ikeenyere akaafọna-egosi ire ụtọ na ndị ọzọ toned.
Kedu ihe ga - eme ma ọ bụrụ na ị na - anọdụ ala kwa ụbọchị?
Ike ike bụ otu n'ime ihe mkpali kasịnụ makana-eme situps. Site ike, tightening, na toningnke giisi,gịbelatanke giihe ize ndụ nke mgbu azụ na mmerụ ahụ.GịAga m enwe ike iji nwayọ nwayọ dị kagịzuru ezunke gieme kwa ụbọchị ma sonye na egwuregwu.23.05.2019
Mgbe ị na-ebugharị nkwonkwo aka dị?
Kwaa- a na-eji pups mee ebe niile iji nyochaa ma wusie ahụ ike elu. Ha na-abụkarịrụrụna 1 nke ụzọ 2: nankwojiakana hyperextension na nankwojiakana-anọpụ iche.
Kedu ụdị mmega ahụ ị nwere ike ime n'oche?
Omume oche 11 na-arụ ọrụ ọsọ ọsọ nke na-arụ ọrụ yana ịga mgbatị. 1 1. Ogwe aka okirikiri. Nọdụ ala n'oche ahụ na azụ gị kwụ ọtọ, ụkwụ gbadoro na ikpere 90 ogo na ụkwụ a kụrụ n'ala. Metu ubu gi na 2 2. Kpochie Aka Ji Aka. 3 3. Triceps mikpuo. 4 4. oche oche. 5 5. Nọdụ ọdụ Hip Nkwanye. Ihe ndị ọzọ
Kedu ka esi eme oche omume maka ndị agadi?
1 Bido site na ịnọdụ ala n ’oche siri ike, ụkwụ gị ga-agbadosi ike n’ala, ha ga-enwekwa obosara kewaa. 2 Jide njedebe nke otu mgbochi na aka gị ọ bụla n’ubu. 3 Ikpere aka gị ga-ehulata, ọbụ aka gị ga-echekwa ihu n'ihu, pụọ n'ihu gị. Ihe ndị ọzọ
Kedu otu esi ebuli ụkwụ gị n'oche?
Nọdụ ala na nsọtụ oche ahụ, bulie ụkwụ gị, gbue ụkwụ gị na ikpere wee gbadata ntakịrị n'etinyeghị spain gị. Bendị aka gị ka aka ikiaka gị dị na ala nke ọgịrịga gị. Sere otubo gị wee jiri nwayọ gbagoo n'aka ekpe. Buru ikuku ma gbaghaa aka nri. Tinyegharịa mmega ahụ ugboro iri atọ n'akụkụ ọ bụla. 7. Eweli ụkwụ